Britain oo Shaacisay Xiliga la qabanayo shir Soomaalida ku saabsan oo dalkeeda ka dhici doona
Dowladda Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday xiliga uu qabsoomayo shir ay marti gelineyso oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya kaasi oo ay ka qeybgeli doonaan madax ka kala socota dalalka caalamka.
Ra’isulwasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa shaaciyey in isaga iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay isla go’aamiyeen xiliga uu qabsoomayo shirka ay dowladda Ingiriiska qaban qaabineyso kaasi oo ku saabsan Soomaaliya waxaana shirkaasi ay dowladda Britain u qoondeeysay inuu dhaco bartamaha sanadkan 2013.
Sida uu Ra’isulwasaare David Cameron ku sheegay qoraal uusoo dhigay Boggiisa Twetterka shirkan waxa ay isaga iyo Madaxweynaha Soomaaliya isla garteen inuu qabsoomo Todobada bisha May ee sanadkan 2013 ayadoo qoraalkaasina uu u qornaa sidan:-
“PM & Somali President agree to co-host international conf on#Somalia on 7 May in UK. Will build on last year’s successful meeting in London”
Shirkan waxa uu dhisayaa shirkii London ee sanadkii aynu kasoo gudubnay 2012 ay marti gelisay Dowladda Ingiriiska kaasi oo Madax badan ay ka qeybgaleen kuwaasi oo dalalka caalamka ka kala socday.
Qaban qaabo ahaan marka la fiiriyo dhinacyada ka qeybgalaya shirka bisha May ee sanadkan 2013 ka dhici doona magaalada London waxa uu si aad ah uga duwan yahay shirkii sanadkii ay isla Dowladda Ingiriiska qabatay laba arimood dartood.
Mida koobaad Soomaaliya oo ka baxday KMG islamarkaana ay ka jirto Dowlad rasmi ah iyo mida Labaad oo ah Dowladda Ingiriiska oo heysa Gudoomiyaha dalalka ku hormaray Warshadaha ee G8 waxaana shirka kasoo qeybgeli doona dhammaanba dalalka la isku yiraahdo G8.
Mudada uu shirka socon doono oo ah hal maalin 07-May-2013 waxaa dhammaanba dhinacyada ka qeybgalaya oo ay ku jiraan Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya ay isla gorfeyn doonaan sida Soomaaliya loogu taageeri karo isbedelka cusub ee ay gashay maadaama dalka uu hada leeyahay Dowlad ay guud ahaanba Umadda Soomaaliyeed wada taageersanyihiin.